Matongerwo eNyika, 20 Kurume 2018
Chipiri 20 Kurume 2018
Kurume 20, 2018
VaMnangagwa naVaMasiyiwa Votaura kuMusangano weAfrican Union
Mutungamiri wenyika, VaEmerson Mnangagwa, vari mu Rwanda kumusangano wechimbi chmbi we African Union.
Vagari Vopengera Mitero yeMigwagwa kuMasvingo
Asi meya weguta reMasvingo, VaHubert Fidze, vanoti chirongwa ichi chakadzoswa mushure mukuwirirana nevagari paigadzirwa bhajeti regore rino.
Vanotengesera paEgodini Vanobva Kuitira Kuvakwa kweZvitoro zveChizvinozvino
Vanhu vange vachitengesera panzvimbo yeEgodini muBulawayo vabva panzvimbo iyi Chipiri mangagwana kuitira kuti kuvakwa kweEgodini Mall kutange.
Zimbabwe Yokurudzirwa Kuvandudza Mitemo Kuitira Kuti Vanotamiswa neHurumende Varipwe
Vachitaura pamusangano wekuzeya kuti mitemo ungagadziriswa sei kuti hurumende ikwanise kupa vanhu ava kodzero dzavo, imwe nhengo ye ZLHR, VaJeremia Bamu, vati pane mitemo yakawanda inobata bata nyaya dzevanhu asi mitemo iyi ionfanira kusimbaradzwa.
Chikwata cheEU Chiri Kuongorora Gadziriro yeSarudzo Chinotanga Misangano Munyika
Chikwata che European Union chevanhu vapfumbamwe chiri munyika kuzoongorora gadziriro yesarudzo kuburikidza nekuita misangano nevamiriri vehurumende, vemapato anopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira.
Minda neHurombo Zvokurukurwa Mumusangano Uri Kukokerwa neWorld Bank muWashington
Bhanga repasi pose, reWorld Bank, riri kukokera misangano yekuzeya nyaya dzeminda nehurombo pasi rose.
MDC Alliance Yotumira Nhume kuMusangano weAfrican Union
Chikwata ichi chiri kutarisirwa kunosvitsa gwaro rekuzivisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kubva pakatorwa masimba naVaEmmerson Mnangagwa, uye zvichemo zvinonzi nemubatanidzwa uyu zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa pamwe nemunguva yesarudzo.
Vashandi vepaMugodhi weShamva Gold Mine Voramwa Mabasa
Vashandi vepamugodhi weShamva Gold Mine, vanonzi vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachinyunyuta nemashandiro avari kuita, uye kusatambiriswa mihoro nyavo kwemwedzi mina yadarika.
VaMnangagwa Vowandudza Mutemo weKuendesa Hupfumi kuVatema
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi wa 14 Kurume vakawandudza mutemo wekuenda hupfumi kuvatema uyo unoshorwa zvakanyanya nevamwe uchinzi unopa kuti vekunze vasauye kuzotanga mabhizimisi munyika.
Kurume 19, 2018
Vadzidzisi Voronga Kumbomira Mabasa Kusvika Zvichemo Zvavo Zvagadziriswa
Zichitevera musangano waitwa nevamiriri vemasangano evarairidzi ose muHarare nhasi, varairidzi varonga kuratidzira pamuzinda wemutungamiriri wenyika we State House musi wa 27 Kubvumbi uye kuramwa mabasa muna Chivabvu kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo.
UN Inoti Iri Kufadzwa Negadziriro dzeSarudzo Dziri Kuitwa neHurumende YaVaMnangagwa
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited Nations Development Program, UNDP, VaAchim Stainer, avo vanga vachishanya muZimbabawe kwe mazuva matatu apfuura, vanoti United Nations inofara nebasa riri kuitwa ne hurumende yaVaMnangagwa mugadziriro yesarudzo dzegore rino.
Dr Parirenyatwa Vokundikana Kukurudzira VanaChiremba Kuti Vasaramwe Mabasa
Mushure memusangano wavaita negurukota rezvehutano, Dr. David Parirenyatwa, mutauriri wesangano ravanachiremba, reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Mxolisi Ngwenya, vanoti vana chiremba havasi kuzodzokera kubasa kusvika zvichemo zvavo zvese zvagadziriswa.